राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका नयाँ कार्यसमितिलाई पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा बधाई • Health News Nepal
काठमाडौं, २८ चैत २०७८
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको चौथो महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुभएका पधाधिकारीलाई एमाले पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेल ज्यूले बधाई दिनु भएको छ।
कमलादीमा महासंघको महाधिवेशनले डा. गौतमको अध्यक्षतामा १५१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर औपचारिक घोषणा गरेर बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो।
देशभरबाट महाधिवेशनका लागि ७०० बढी स्वास्थ्यकर्मी काठमाडौंमा उपस्थित भएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो।
महाधिवेशनले एक जना अध्यक्ष, एक महिला सहित ४ उपाध्यक्ष, महासचिव १, उपमहाचिव एक पुरुष / सचिव ८ र कोषाध्यक्ष १ गरि १७ जना पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यिय कार्यसमितिको चयन गरेको हो। सात वर्षपछि भएको महाधिवेशनमा सम्पन्न भएको हो।
हाल संगठनमा करीब २८ हजार स्वास्थ्यकर्मीको आवद्धता रहेको संघको दाबी छ । संघको चिकित्सक, नर्सिङ,स्वास्थ्यकर्मी लगायत ६ वटा विभिन्न विषयगत घटक समितिहरु रहेका छन् । ‘सामाजिक न्याय र पेशागत मर्यादाका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको एकता, आमनागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नारा रहेको छ।
Tags: Corona Virus #Covid19Dr.Jhalak gautamShankar pokharel